ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker ဓာတု
YK-11 အမှုန့်ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor Module (SARMs) ၏အုပ်စုတစုကပိုင်ဆိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်အဘယ် YK11 မ ...... ရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည်
SKU: 431579-34-9 အမျိုးအစား: Sarm စီးရီး
ထို့အပြင် Myostine အဖြစ်လူသိများ YK11, စျေးကွက်အပေါ်အပြင်းထန်ဆုံး SARMs ၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည်။ ဒါဟာဒြပ်တီးရွိုက်ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး C2C12 myoblasts အတွက်စသည်တို့အတွက်ဟိုလှုပ်ရှားမှုရှိပြီးဤကိစ်စတှငျ dihydrotestosterone ထက် သာ. ကြီးမြတ်အာနိသင် (DHT) ပြသထားတယ်။ YK11 ကိုလည်း Myostatin inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကြွက်သားရဖို့နဲ့အဆီဆုံးရှုံးရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများ YK11 ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြည့်အဝအလားအလာသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းကြွက်သားအကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်အတွက်, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးပုံမှန် SARM မဟုတ်ပါစဉ် YK11, အပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး super-SARM ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်အန္တရာယ်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူ, ဒီ SARM-Steroid တစ်မျိုးမျိုးစပ်ကနေမျှော်လင့်ရာ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးပေးရန်သိပ္ပံနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဆင်းချိုးတော်မူ၏။
ဒါဟာအစ YK11 က myostatin inhibitor အောင်, myostatin လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချရန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါ YK-11 sarm ကျိန်းသေထွက်ရှိအင်အားအကောင်းဆုံးမြား၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ သင်အမှန်တကယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုဘယ်လောက်ခိုင်မာတဲ့၏ LGD-4033 သို့မဟုတ်အခြား SARM မှ YK နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။
သို့သျောလညျးကိုပင်သော်လည်း YK-11 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကဒီဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူပြုသည်ကိုသာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှိခဲ့ဘူးသောစိတျထဲမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ Keep ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူအများစုမဟုတ်ဘဲထိုကဲ့သို့သော Ostamuscle, rad-140 သို့မဟုတ် GW-501516 အဖြစ် SARM နှင့်အတူလိုက်ဟန်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
YK11 ကြောင့်လျင်မြန်စွာအများကြီးအမျိုးမျိုးသော SARMs တူသောအနည်းငယ်မျှသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်မှကာယဗလထံမှအကျိုးစီးပွားရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ YK11 ၏ဖွဲ့စည်းပုံထူးခြား၏။ SARMs ထက် steroids နှင့်အတူဘုံ၌ သာ. အဆိုပါ YK မော်လီကျူး၏ရှယ်ယာတစ်ခုကိုမကြာခဏမှားယွင်းစွာရှိသမျှသည်အခြားသော Non-တီးရွိုက် SARM ကဲ့သို့တူညီသောပုံးထဲတွင်နေရာရဲ့ပေမယ့်။
ကျွန်တော်တစ်ဦး SARM အဖြစ်လူတန်းစား YK11 ကြလျှင်ကစျေးကွက်အပေါ်အင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်၎င်း၏မျိုးအများဆုံးဖြစ်ပွားပါလိမ့်မယ်။ ကသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအန်ဒရိုဂျင် receptor များမြှင့်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်အဲဒီခေါင်မိုးကတဆင့်ရိုက်ကူးဖို့ catabolic အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောပါပဲ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, YK11 တစ် myostatin inhibitor အဖြစ်လူသိများသည်။
◆ ကြွက်သား Size ကိုတိုးပွါး
YK11 se နှုန်းတစ် SARM မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ကကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့မယုံနိုင်စရာနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ S23 ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ဟုဆိုသည်ရဲ့။
လိင်ဟော်မုန်းခိုင်ခံ့ကျန်းကျန်းမာမာ, အရိုးတို့ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရရှိနိုင်သက်သေအထောက်အထား YK11 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အရှိဆုံး SARMs အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဆင်တူသည်အရာ, အန်ဒရိုဂျင် receptors မှသူ့ဟာသူ binding ခြင်းဖြင့်အရိုးအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါပြသထားတယ်။
YK11 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုသုံးတော့တဲ့သူကာယဗလတစ်နေ့လျှင်မီလီဂရမ် 10 မှ 15 ၏ဆေးညွှန်းထဲမှာယူပြီးထိုသူတို့အဘို့ပဲဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းပြောကြသည်။ အခြားသူများကတစ်နေ့လျှင်5မီလီဂရမ်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။4ရက်သတ္တပတ်မှ 8 များအတွက်အများစုမှာအသုံးပြုသူများသည်သံသရာက။ သင်တို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသော SARMs အတူတကွသီးနှံများကိုပုံကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) ၏
ရီးရဲလ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် YK-11 Cycle နှင့်အတွေ့အကြုံတုံ့ပြန်ချက်
Thevis, အမ်, Piper, တီ, Dib, ဂျေ, Lagojda, အေ, Kühne, ဃ, Packschies, အယ်လ်, ... & Schänzer, ဒဗလျူ (2017) ။ ထိန်းချုပ်မှုရည်ရွယ်ချက်များ doping များအတွက်ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကို (SARM) YK-11 ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometric စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Mass Spectrometry အတွက်လျင်မြန်စွာဆက်သွယ်ရေး, 31(14), 1175-1183 ။
Kanno, Y. , အုတ, R. , Someya, K. , Kusakabe, တီ, Kato, K. , & Inouye, Y. (2013) ။ ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကို, YK11, follistatin စကားရပ်အားဖြင့် C2C12 myoblasts ၏ myogenic ကွဲပြားခြားနားမှုထိန်းညှိ။ ဇီဝဗေဒနှင့်ဆေးဝါးသတင်းလွှာ, 36(9), 1460-1465 ။
Piper, တီ, Dib, ဂျေ, Putz, အမ်, Fusshöller, G. အ, ပေါ့ပ်, V. , Lagojda, အေ ... & Thevis, အမ် (2018) ။ doping ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်အလားအလာအသုံးဝင်သော metabolites ၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ: အ SARM Y1K11 များ၏အတွက် Vivo ဇီဝြဖစ်ပေါ်လေ့လာရေး။ မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, 10(11-12), 1646-1656 ။
ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့် (1010396-29-8)
က S-23 အမှုန့် ...... ပိန်တိုးမြှင့်ဖို့သက်သေပြခဲ့ပြီးသည့်နှုတ် bioavailable, nonsteroidal ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကို (SARM) ဖြစ်ပါသည် ..